Tartanka horyaalka xulalka Qaramada Yurub ayaa si xiiso leh uga socda qaarada Yurub… – Hagaag.com
Tartanka horyaalka xulalka Qaramada Yurub ayaa si xiiso leh uga socda qaarada Yurub…
Posted on 15 Oktoobar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Xulka qaranka Poland ayaa ku hogaaminaya Group-ka A ee Horyaalka Heerka Koowaad ee heerka guruubyada Koobka Qaramada Yurub ka dib guushoodii 3-0 ee ay ka gaareen kooxda Bosnia iyo Herzegovina wareega afaraad ee group-ka.
Kooxda reer Poland ayaa ka faa’iideysatay barbarihii 1-1 ay isla galeen kooxda Talyaaniga oo martigelisay kooxda Netherlands, sidaasina uga faa’ideysatay inay hogaanka ku qabato 7 dhibcood, halka Italia ay leedahy 6 dhibcood, Netherlands ay leedahay 5 dhibcood oo ku jirta kaalinta 3aad, iyadoo Bosnia ay leedahay 2 dhibcood.
Garoonka “Athlete Azure de Italia” ee ku yaal Bergamo, Italy, ayaa kooxaha Talyaaniga iyo Netherlands ku ciyaaray oo barbaro 1-1 isla dhaafi waayey.
Labada gool ee ciyaarta ayaa yimid qeybtii hore ee ciyaarta, iyadoo kooxda reer Talyaani ay ku guuleysatay inay ku hormarto gool dhalinta oo u saxiixay Lorenzo Pellegrini (16), laakiin wax yar ka dib Netherlands ayaa la timid goolka barbaraha waxaana u dhaliyay Donnie Van der Beek (25).
Garoonka Miejski ee ku yaal magaalada Polishka ee Poznan, Ayaa waxaa isku arkay kooxaha Poland iyo Bosnia iyo Herzegovina, waxaana looga badiyey Bosnia seddax goal.
Belgium ayaa si dirqi ah uga adkaatay xulka Iceland oo isku ah Group-ka labaad ee horyaalka heerka koowaad, weeraryahanka reer Belguim Romelu Lukaku ayaa sii wata hiwaayadiisa ruxitaanka shabaqa wuxuuna dhaliyay labo gool si uu dalkiisa ugu hogaamiyo guul qaali ah oo 2-1 ah oo ay ka gaaraan xulka Iceland.
Xulka qaranka Belguim ayaa dib u helay hogaanka Group-kooda, iyaga oo dhibcahoodii ka dhigay 9 dhibcood, waxayna dib u heleen isku dheelitirkoodii ka dib guuldaradii England ka soo gaadhay wareegii kan ka horeeyey.
Isla group-kaasi, xulka qaranka Deenishka ayaa ka faa’iideystay yaraanta tirada ka jirta safka martigaliyahooda Ingriiska waxayna uga badiyeen gool nadiif ah oo uu dhaliyay Christian Eriksen (35) (rigoore ah).
Xulka England ayaa dib ugu dhacay kaalinta seddexaad ee guruubka.
Qeybtii seddexaad ee group-yada heerka koowaad, kooxda Faransiiska ayaa awood u sheegatay dhiggeeda Croatia, waxayna uga badisay 2-1, halka xulka Portugal oo 3-0 uga badiyey Sweden.
France ayaa kaalinta koowaad kaga jirta group-ka C, inkastoo ay ku weheliso xulka qaranka Portugal min 10 dhibcood, halka dhibcaha Croatia ku joogsadeen 3 dhibic iyadoo ku jirta kaalinta 3aad, xulka Sweden ayaa ugu hooseeya group-kan iyadoo aan laheyn wax dhibco ah.
Xulka qaranka Bortuqiiska oo haya horyaalka European Nations Cup iyo European Championship, ayaa ka adkaaday xulka Sweden iyadoo weliba ka maqan yahay xiddigooda weerarka iyo kabtankooda, Cristiano Ronaldo, sababo la xiriira infekshanka cudurka Corona, iyadoo sidaasi tahay kooxdu waxay gaartay guul qaali ah oo ay uga badisay 3-0 dhigeeda reer Sweden.